MMEMME ỌNWỤ NA MBILITE N’ỌNWỤ JIZỌS 2 – hoo!haa!!
Taa bụ Satọde di nsọ (Holy Saturday). Taa bụ ụbọchị ndi kwere na Jizọs nọ na nche ịhụ mbilite n’ọnwụ ya.
Anyị bụ ndi Igbo na-ekwu okwu sị na nwa ikorọbịa na-eche enyi ya nwanyị n’abalị na-anụ nzọm ụkwụ ndi mụọ. N’otu aka ahụ, anyị bụ ndi otu Kraist n’ụwa nile gbaa gburu gburu na-anụ nzọm ụkwụ ndi mụọ di iche iche taa n’ihi na anyị nọ na-eche mbilite n’ọnwụ onye nwe anyị bụ Jizọs Kraist.
Ebe ọbụ na ofeke anaghị ama mgbe ekere nkụ ụkwa, ọdị mkpa ka anyị kọwatara onwe anyị ka nchea si dị.
Nke mbụ, anya eji ahụta mbilite n’ọnwụa bụ nanị anya ime mụọ. Mana ofeke nwere ike na-eché na ọbụ anya nkịtị ka anyị ga-eji hụ ya mgbe ọga-ebilte. N’ihi nkea, anyị ga-amụrụ anya nke ime mụọ, nọrọ n’ekpere ma jirikwa ezigbo omume na okwukwe tọrọ atọ were chere yabụ mbilite n’ọnwụ nke nna anyị ukwu Jizọs.
Anyị ga-echeta na yabụ nnukwu mmanwụ bụ Jizọs agwawori anyị na mbụ, na anyị ga-amụrụ anya, na-echekwa nche n’ihi na anyị amaghị mgbe ya ga-abịa. Ọ sịrị na ọbịbịa ya ga-adịkwa ka nke onye ori. Isi okwu di na nkea bụ na anyị ga amụrụ anya ma kee nkwụcha ijiri anya nke ime mụọ anyị hụ mgbe ọ ga-ebilite n’ime nderi abalị taa.
Dịka anyị siri kwue na mbụ, onye na-eche enyi ya nwanyi n’ime abalị na-anụ nzọm ụkwụ ndi mụọ. N’ime obi anyị taa, anyị ga anụkwa ọtụtụ nzọm ukwụ ndị mụọ.
N’ebe ndi iro Jizọs nọ, ha ga na-agwa anyị na ihe anyị na eme taa enweghị isi n’ihi n’uche ha akụkọ gbasara mbilite n’ọnwụ Jizọs bụ nke aja-mbene. Mana anyị kwesịrị ima ma kwere n’onu nke na-agwa anyị na onye anyị na-eso bụ Jizọs bụ dike n’agha. Nanị ya bụ onye gara n’ili ma si na ya bilie rọgorokwa n’enigwe. Ebe ọbụ sọ ya mere ụdị ihea kamgbe mbido nke ụwa rue ta, anyị kwesịrị ima na ọga-emezu ihe dum okwere anyị na nkwa. Umụ Igbo, ka anyị gaa n’uhu, mụrụ anya, na-echekwa nche n’ihi na onye anyị na-eche bụ ọkaa-omee, dike n’agha, Ọ ga-abịarịrị. Ya gazienu!
Previous Post: MMEMME ỌNWỤ NA MBILITE N’ỌNWỤ JIZỌS
Next Post: AKPỌGIDELE MMADỤ ASAA N’OBE NA MBA FILIPIN